FGM Education Program | Advocacy for Oromia
Gochaan kun maqaa addaddaan beekama. Hawaasa Oromoo garii keessatti “dhaqna-qabaa” jedhama. Bakka kaanitti immoo ” “kitaanaa” jedhu. Gochaan qaama saala shamarranii muruu kun maqaan addaddaatti beekamus, gachaan isaa walfakkii qaba. Garuu, sadarkaa fi akkaataan gochaa kana itti raawwatan addaddummaa ni qaba. Kitaanaan kun rakkoo fayyaa fiduu bira darbee, lubbuu illee yerii itti galaafatu ni qaba. Haata’uutii, sababni kittaanummaan kun itti raawwatamu hubannaa fi ka’umsa irraa ka’u addaddaa ni qaba.
Qorannoon armaan gadii kun hundee fi hubannoo dhaqna-qabaa biyyoota garaa garaa keessatti raawwatamaa turee fi jiru irratti kan qophaa’ee dha.
HARKA GAARII: Kittaanaan Balaa Malee, Galaa Hin Qabu!
Kittaanaan dubaraa gochaa barsiifannaa badaa keessatti ramadamuu dha. Gochaan kun Oromiyaa keessatti yeroo dheeraaf waan tureef, akka aadaatti ilaalama. Garuu, kittaanaan gochaa umurii ijoollummaatti raawwatamuu dha.
Gochuun kun shamarran irratti balaa guddaa fida; bara jireenyaa isaanii guutuu rakkoof isaan saaxiluu dha. Qaama saalaa seelessuun, amala shamarranii hin siilessu!!
Harki Gaariin, dhala ofii hin hiraarsu!!